> Resource > Android > Transfer Data in New Android Phone ee One Click
Just helay badalka S4 in aan S4 kulayl. Sidee baan ku awoodi karaa inuu wareejiyo oo dhan aan fariimaha, sawiro, faylasha, barnaamijyadooda iyo macluumaadka iyo wax walba oo aan telefoonka jirka ka mid ah oo cusub? Fadlan caawi. Thanks ka hor.
Aad telefoonka aad Android dhowr sano, oo hadda aad u ilaawaan, waayo, mid cusub. Ka dib markii taleefanka cusub Android, waxaad ogaatay in dhamaan xogta, oo ay ku jirto barnaamijyadooda aad ugu jeceshahay, xiriirada, SMS iyo sawiro, ayaa weli xayiran telefoonka jir. Haddii aad niyad ah oo ku saabsan xogta si phone cusub Android wareejinta, waxaan hubaa in aad kaliya u yimaadeen inay meel sax ah. Maqaalkani waxa uu ku saabsan yahay in hadalka ku saabsan sida ay u gudbiyaan xogta si phone cusub Android aan ka kaaftoomi kasta.
Sidee si ay u gudbiyaan xogta si phone cusub Android
Si aad u samayn iibsiga xogta, ugu horreeya oo dhan, waa in aad kala soo bixi software kala iibsiga phone desktop ah. Taasi waxay ku Wondershare MobileTrans (Windows) ama Wondershare MobileTrans u Mac , si gaar ah loogu talagalay in lagu ha kuu soo gudbin dhan jadwalka, barnaamijyadooda, fariimaha qoraalka ah, sawiro, music, videos, abuse call iyo xiriirada ka mid phone Android kale kula 1 click. Waxa kale oo muhiim ah waa in software this sidoo kale siinayaa fursad ay ku data ka Nokia (Symbian) telefoonka iyo iPhone, iPad iyo iPod aad u wareejiyo telefoonka cusub Android aad.
Download ku version on your computer Windows ama Mac oo raac talaabooyinka hoos ku qoran. The version Mac ma taageeri xogta iyo ka Nokia (Symbian) phone wareejinta.
Tallaabada 1. Launch Wondershare MobileTrans software
Waxa ugu horeeya waa in si loo soo dajiyo iyo abuurtaan software MobileTrans this on PC Windows ah. Markaas, furmo suuqa hoose muujinaysaa ilaa.
Fiiro gaar ah: Haddii aad u socoto si ay xog ka iPhone, iPad ama iPod wareejiyo telefoonka cusub Android, waa in aad la rakibi Lugood on PC Windows ah.
Tallaabada 2. Isku aad telefoonada Android jir ah oo cusub si ay u PC Windows ah
Connect aad laba telefoonada Android inay PC Windows ka deeruhu galay fiilooyinka USB. Ka dib markii la ogaado, aad arki doonaa labada telefoonada Android on furmo suuqa hoose. Phone Isha, jir Android ah, waxaa ku qoran dhinaca bidix ee suuqa kala, iyo telefoonka Android cusub, oo loo yaqaan telefoonka Ahaado, u muuqataa on xaq.
By sax xogta oo cad ka hor inta nuqul , u MobileTrans software ka saari doonaa macluumaadka telefoonka cusub Android in uu kaydiyo kuwa ka phone hore.
Fiiro gaar ah: Wondershare MobileTrans ayaa si fiican u la shaqeeya telefoonada badan Android. Halkan waxaa ku qoran faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan taageeray telefoonada Android.
Tallaabada 3. Transfer xogta Android inay phone cusub
Sida aad ka arki, aad wareejin karaan dhammaan xogta ku qoran suuqa kala dhexeeya telefoonada Android. Waxa kale oo aad ka saari kara calaamado ka hor waxyaabaha in aadan rabin in lagu wareejiyo. Marka qabtaan oo dhan diyaar u dhamaato, waxaad riixi kartaa Start Copy inuu ku soo bilowdo kala iibsiga xogta. Ha iloobin in aad guji OK markii wareejinta xogta la sameeyo.
Download software si xog ka Android phone wareejiyo phone cusub Android.